VaMnangagwa Vokoka VaUhuru Kenyatta Kuzovhura Zviri Pamutemo ZITF
Zimbabwe International Trade Fair yakazivisa nemusi weChina kuti mutungamiri wenyika yeKenya, VaUhuru Kenyatta ndivo vachavhura zviri pamutemo musangano wekutengeserana mwedzi unouya.
Musangano wechimakumi matanhatu nemaviri kana kuti 62nd edition weZITF uri kutanga musi wa 26 wopera musi wa 30 Kubvumbi uchiitwa pasi pedingindira rakanangana nekuvandudza magadzirirwo nemakwenenzvererwo ezvinhu mukuunza budiriro munyaya dzezvehupfumi kana kuti “Reimagine, Reinvent Value Chains for Economic Development”.
Sachigaro weZITF VaBusisa Moyo vaudza Studio 7 kuti ichi chiitiko chikuru vakati vari kutarisira kuti kudyidzana kweKenya neZimbabwe kuchasimbaradzwa. Vati VaKenyatta vakakokwa nemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa avo vange vari kukenya kumusangano wekudyidzana.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika VaEarnest Mudzengi vatendawo kuti kushanya kwaVaKenyatta kwakakosha asi vati hazvifanire kungova zvematongerwo enyika chete. Vati kuti Africa ibudirire, nyika sdzose dzinofanira kusimbisa kudyidzana dzisati dzaenda kunyika dzakabudirira.
Gore rakapera musangano weZITF wakavhurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika VaMnangagwa asi hauna kunyatsofamba sezvaitarisirwa nekuda kwechirwere cheCovid-19.